14/04/2018 - Page 3 sur 5 -
Fanafihana mpandraharaha tany Ambanja : Jiolahy telo nadoboka am-ponja
14/04/2018 admintriatra 0
Jiolahy miisa telo, tompon’antoka tamin’ny fanafihana mpandraharaha mpivarotra drakaka tany Ambanja, vao tsy ela akory izay no nadoboka am-ponja vonjimaika avy hatrany taorian’ny nanolorana azy ireo teo anatrehan’ny fampanoavana tany an-toerana ny alarobia lasa teo. …Tohiny
Olan’ny famatsiana jiro sy rano : Hiara-hiasa ny jirama sy ny sefo fokontany
Isan’ny mahatonga ny fahatapahan’ny jiro matetika eto an-drenivohitra ny halatra tariby, indrindra eny amin’ireny toerana iva ireny. Raha ny tsikaritra, dia tariby iray ho an’ny tokantrano efa ho 100 isa. Vokatr’izay, lasa tsy mahazaka intsony …Tohiny
Nandresy indray ny demokrasia : Mijanona amin’ny toerany ny ben’ny tanàna
Diso ny vinavinan’ny Mapar fa kasain’ny fanjakana esorina amin’ny toerany ny ben’ny tanànan’i Mahajanga. Omaly tokoa mantsy no nanaovana fandinihina ny momba ity ben’ny tanàna ity noho ny fomba fitantanana tsy nazava izay nampimenomenona ny …Tohiny
Tsy fandriam-pahalemana : Niato ny fampianarana tao amin’ny EPP sy CEG Ivongo
Na dia eo aza ny ezaka ataon’ny Fitondram-panjakana amin’ny alalan’ireo mpitandro filaminana dia mbola manjaka ny tsy fandriam-pahalemana any amin’ny faritra Ihorombe. Efa tsy mifidy izay tafihina ireo dahalo fa lasibatra hatramin’ny sekoly. Vokatry ny …Tohiny
Amin’ny faha-7 Novambra ho avy izao araka ny daty navoakan’ny governemanta no daty hanatanterahana ny fihodinana voalohany amin’ny fifidianana filoham-pirenena, taorian’ny fanapahan-kevitra navoakan’ny HCC ny amin’ny tokony hisian’ny fifidianana mialohan’ny fotoana voalazan’ny Lalàm-panorenana. Tsara araka ...Tohiny